တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ ရောင်းရန်အတွက် တိုက်ခန်းများ -354 စာရင်းများ | FazWaz.com.mm
ရောင်းရန်အတွက် တိုက်ခန်းအိမ်ခြံမြေ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအိမ်သစ်များဈေးနှုန်းလျော့ချထားသော အိမ်များ
တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ ရောင်းရန်အတွက် တိုက်ခန်းများ
FazWaz.com.mm ပေါ်တွင် ရရှိနိုင်သော 354 တိုက်ခန်းများ
Virtual 3D tours of ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုက်ခန်းများ for sale
Turn on this filter to only view တိုက်ခန်းများ for sale with 3D virtual tours!
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at2Bedroom Condo for sale in Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,250 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သင်္ဃန်းကျွန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for...
2,500 သိန်း (3 သိန်း/စတုရန်းပေ)
1 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at 1 Bedroom Condo for sale in Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 688 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for sale in Yangon စီမ...
1 1 688 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at3Bedroom Condo for sale in Star City Thanlyin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,185 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for sa...
1 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at 1 Bedroom Condo for sale in Star City Thanlyin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 620 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for sale in Star...
1 1 620 စတုရန်းပေ
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at2Bedroom Condo for sale in Star City Thanlyin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 938 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sale...
22938 စတုရန်းပေ
1,000 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 622 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for sale in Star...
Don't miss out! Get notified when new တိုက်ခန်းများ for sale are listed တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
900 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at2Bedroom Condo for sale in Botahtaung, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 600 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sale in...
850 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,080 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sa...
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 625 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sale in...
2 1 625 စတုရန်းပေ
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at2Bedroom Condo for sale in Pazundaung, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,700 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ပုဇွန်တောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sa...
221,700 စတုရန်းပေ
1,550 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,550 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ပုဇွန်တောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sa...
600 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at2Bedroom Condo for sale in Kyeemyindaing, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 688 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် လသာ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sale in Kyeemyin...
2 1 688 စတုရန်းပေ
720 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 625 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် လသာ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sale in Kyeemyin...
750 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at3Bedroom Condo for sale in GOLDEN CITY, Yankin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်3ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,500 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ရန်ကင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for sale i...
11,500 သိန်း (3 သိန်း/စတုရန်းပေ)
1 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at 1 Bedroom Condo for sale in Yankin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 3,000 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ရန်ကင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for sale in Yankin...
1 1 3,000 စတုရန်းပေ
1 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at 1 Bedroom Condo for sale in Tamwe, Yangon
2,150 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at3Bedroom Condo for sale in Thanlyin, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,185 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သန်လျင်မြို့, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for s...
480 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
1 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at 1 Bedroom Condo for sale in Kamayut, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 687 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ကော့မှုး, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for sale in Kamayut...
1 1 687 စတုရန်းပေ
380 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 625 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ကော့မှုး, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for sale in Kamayut...
ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း, အရှေ့ပိုင်းခရိုင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး, မြန်မာ
700 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at2Bedroom Apartment for sale in Dagon Myothit (North), Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 990 စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဒဂုံမြို့သစ်အရှေ့ပိုင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom...
22990 စတုရန်းပေ
570 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
2 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at2Bedroom Condo for sale in South Okkalapa, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 972 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် တာမွေ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sale in South...
2 1 972 စတုရန်းပေ
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at3Bedroom Condo for sale in Shwe Hintha Luxury Condominiums, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,100 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Condo for sa...
1,500 သိန်း (0 သိန်း/စတုရန်းပေ)
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at3Bedroom Apartment for sale in Thaketa, Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 2,200 စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သာကေတ, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedroom Apartment for sa...
322,200 စတုရန်းပေ
5,500 သိန်း (4 သိန်း/စတုရန်းပေ)
3 အိပ်ခန်း တိုက်ခန်း for sale at3Bedroom Apartment for sale in Dagon Myothit (South), Yangon
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော3အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,200 စတုရန်းပေ တိုက်ခန်း တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်3Bedro...
1,100 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 638 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗိုလ်တထောင်, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for sale in Star...
1,700 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့် n/a တို့ဖြင့် 1,239 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သင်္ဃန်းကျွန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for sale in Yango...
2 1,239 စတုရန်းပေ
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော2အိပ်ခန်းများ နှင့်2ရေချိုးခန်းများ တို့ဖြင့် 1,100 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် သင်္ဃန်းကျွန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင်2Bedroom Condo for...
1,250 သိန်း (1 သိန်း/စတုရန်းပေ)
ဤအိမ်ခြံမြေသည် ရောင်းရန်အတွက် ရရှိနိုင်သော 1 အိပ်ခန်း နှင့် 1 ရေချိုးခန်း တို့ဖြင့် 750 စတုရန်းပေ ကွန်ဒို တစ်ခုဖြစ်သည်။ထိုအရာသည် ဗဟန်း, ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် 1 Bedroom Condo for sale in Yangon စီမ...
1 - 30 ၏ 354 အဖြေများ
သင့်အတွက် 176 တိုက်ခန်းများ
ဝယ်ပါ : 278 သိန်း - 13.9K သိန်း
သင့်အတွက် 160 တိုက်ခန်းများ
ဝယ်ပါ : 104 သိန်း - 11.5K သိန်း
သင့်အတွက် 15 တိုက်ခန်းများ
ဝယ်ပါ : 846 သိန်း - 7.39K သိန်း
သင့်အတွက်3တိုက်ခန်းများ
ဝယ်ပါ : 617 သိန်း - 4.98K သိန်း
မြန်မာအစိုးရသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင်မြို့တော်သစ်နေပြည်တော်သို့ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သော်လည်းရန်ကုန် (ဟုလည်းလူသိများသော) ရန်ကုန်သည်နိုင်ငံ၏ယဉ်ကျေးမှု၊ စီးပွားရေးနှင့်စီးပွားရေးအချက်အချာကျဆဲဖြစ်သည်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့မြို့ဖြစ်၏ စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်နိုင်ငံ၏အကြီးဆုံးနှင့်လူ ဦး ရေအထူထပ်ဆုံးမြို့ဖြစ်ပြီးလူ ဦး ရေ ၅ သန်းကျော်သည်ထိုဒေသတွင်နေထိုင်ကြသည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင်မြန်မာနိုင်ငံသည်နိုင်ငံခြားသားများကိုပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးကတည်းကနိုင်ငံသည်သိသာထင်ရှားသောပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ရန်ကုန်သည်အပြောင်းအလဲအများစုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ ယနေ့ခေတ်တွင် visitors ည့်သည်များသည်အလွန်ခေတ်သစ်မိုးမျှော်တိုက်ကြီးများသည်ရာစုနှစ်များစွာတည်ရှိခဲ့သောအထိမ်းအမှတ်များနှင့်ဘေးချင်းယှဉ်နေသည်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ မြို့တော်သည်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသည့်ရေကန်များ၊ အပူပိုင်းသစ်ပင်များနှင့်အရိပ်ရဥယျာဉ်များကိုလည်းအရှေ့တိုင်း၏ဥယျာဉ်မြို့တော်ဟုခေါ်ဆိုကြသည်။
ဦးတည်ရာများနှင့် ပျမ်းမျှများကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုက်ခန်း ဈေးကွက်ကို လေ့လာပါ။
အလယ်အလတ်ရောင်းဈေးသည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် ခန့်မှန်းချေ 1,890 သိန်း ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရှိ ၁စတုရန်းပေ အတွက် အလယ်အလတ်ဈေးနှုန်းမှာ 1 သိန်းဖြ စ်သည်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွင် ရောင်းရန်အတွက် 354 အိမ်ခြံမြေများရှိသည်။
ရန်ကုန်တွင်“ တိုက်ခန်း” ဟူသောဝေါဟာရကိုဓာတ်လှေကားမရှိသည့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများတွင်အသုံးပြုသော်လည်းနိုင်ငံတွင်းရှိအသစ်သောတိုက်ခန်းများသည်ဓာတ်လှေကားများဖြင့်လာသည်။ တိုက်ခန်းအမျိုးအစားများသည်ပုံမှန်တိုက်ခန်းများ၊ အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းများမှ ၀ န်ဆောင်မှုရှိသောတိုက်ခန်းများအထိဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးတိုက်ခန်းများမှာများသောအားဖြင့်ခေတ်သစ်နှင့်ခေတ်မီသော်လည်း၊ နိုင်ငံအတွင်းရှိတိုက်ခန်းအဆောက်အအုံဟောင်းများလည်းရှိပြီးအများစုမှာပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများဖြစ်သည်။
ပုံမှန်တိုက်ခန်းများသည်ပုံမှန်ကွန်ကရစ်နံရံများအစားနံရံများကိုတုပသည့်ပါးလွှာသောအခန်းကန့်များရှိသောစတူဒီယိုခန်းများသို့မဟုတ်အခန်းများကိုများသောအားဖြင့်ပေးလေ့ရှိသည်။ ကားရပ်နားရန်နေရာများကဲ့သို့သောသာယာအဆင်ပြေမှုများရှိသော်လည်းဓာတ်လှေကားမရှိနိုင်ပါ။ အဆင့်မြင့်တိုက်ခန်းများကိုဂုဏ်သိက္ခာရှိသောဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီမှဆောက်လုပ်ပြီးကွန်ကရစ်နံရံများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသောအခန်းတစ်ခန်းရှိသည်။ များသောအားဖြင့်အိပ်ခန်းသုံးခန်းပါရှိသည်။ ဤတိုက်ခန်းအမျိုးအစားတွင်များသောအားဖြင့်ဓာတ်လှေကား၊ လုံခြုံရေးအစောင့်များနှင့်ကားရပ်နားရန်နေရာများရှိသည်။
၀ န်ဆောင်မှုရှိသောတိုက်ခန်းများသည်တန်ဖိုးအရှိဆုံးနေရာများဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့်ပရိဘောဂအပြည့်အ ၀ တပ်ဆင်ထားပြီး၊ အားကစားခန်းမများ၊ ရေကူးကန်များ၊ ကလေးကစားကွင်းများ၊ ၂၄ နာရီလုံခြုံရေးစနစ်များ၊ ကားရပ်နားရန်နေရာများ၊
ရွှေတိဂုံစေတီတော်သည်မီတာ ၁၀၀ အမြင့်ရှိသောရွှေစေတီတော်ဖြစ်ပြီးစိန်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောစွန်းနှင့်တောင်ငယ်တစ်ခုပေါ်တွင်တည်ရှိသည်။ ဤအထင်ကြီးလောက်သောစေတီတော်သည်မြန်မာပြည်၏အရေးအကြီးဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဘုရားဖူးနေရာဖြစ်ပြီးမြို့တော်အများစုမှမြင်နိုင်သည်။
ရန်ကုန်သည်အရှေ့တောင်အာရှရှိကိုလိုနီခေတ်တွင်အကြီးမားဆုံးသောအဆောက်အ ဦး များ၏နေရာလည်းဖြစ်သည်။ သူတို့ထဲမှအများစုသည်ပြိုလဲလျက်ရှိပြီးဘေးလမ်းများပေါ်တွင်ဖုံးကွယ်ထားကြသော်လည်း visitors ည့်သည်များသည်ကမ်းနားလမ်းရှိကမ်းနားလမ်းတွင်အကြီးမားဆုံးသောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
မြို့၏အခြားထင်ရှားသည့်ဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုမှာများပြားလှသောစျေးဆိုင်ငယ်များနှင့်ဆိုင်ခန်းများနှင့်ပြည့်နှက်နေသောဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းစျေးဖြစ်သည်။ visitors ည့်သည်များသည်လက်မှုပညာ၊ အနုပညာ၊ ရှေးဟောင်းပစ္စည်း၊ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်အဖိုးတန်ကျောက်မျက်များကိုရှာဖွေနိုင်သည်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တိုက်ခန်း တွင် အိမ်ခြံမြေ အရွယ်အစားအလိုက် အိမ်ခြံမြေ ပျမ်းမျှဈေးနှုန်းမျ
တိုက်ခန်း အရွယ်အစား ပျမ်းမျှ ဈေးနှုန်း 1 အိပ်ခန်း (86 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 1,290 သိန်း2အိပ်ခန်းများ (122 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 1,730 သိန်း3အိပ်ခန်းများ (120 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 2,920 သိန်း4အိပ်ခန်းများ (21 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 3,620 သိန်း5အိပ်ခန်းများ (3 တိုက်ခန်းများကြည့်ပါ) 4,020 သိန်း
ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့ရှိစျေးနှုန်းများနှင့်ငှားရမ်းခများသိသိသာသာမြင့်တက်ခဲ့သော်လည်း၎င်းနေထိုင်ရန်ကုန်ကျစရိတ်မှာနိုင်ငံခြားသားအများစုအတွက်စျေးနှုန်းချိုသာဆဲဖြစ်သည်။ လူနေမှုဘ ၀ ကုန်ကျစရိတ်သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက် ၄၀% ခန့်ပိုမိုနိမ့်သည်။ မြန်မာကျပ်ငွေ (MMK) သည်တရားဝင်ငွေကြေးဖြစ်ပြီး ၁ ဒေါ်လာမှလဲလှယ်နှုန်းမှာ ၁,၃၆၀ ကျပ်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတွင်းရှိအချို့သောခရီးသွားsomeရိယာများတွင်အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုလက်ခံသည်။ ငွေသည်မြို့ထဲတွင်ဘုရင်ဖြစ်သော်လည်းသင်၏ငွေတောင်းခံလွှာများသည်အသစ်အဆန်းဖြစ်ရန်သေချာစေပါ။
ရန်ကုန်တွင်ရုံးသုံးဘာသာစကားမှာဗမာဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားသည်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်မပြောဆိုသော်လည်းအထူးသဖြင့်ခရီးသွားareasရိယာများတွင်လူအများစုသည်အနည်းဆုံးဘာသာစကား၏အခြေခံနားလည်မှုရှိသည်။ တိုင်းပြည်၏အကြီးဆုံးဘာသာရေးထေရ ၀ ါဒဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သောကြောင့်ရန်ကုန်ရှိယဉ်ကျေးမှုသည်ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်အမြစ်တွယ်နေသည်။
ရန်ကုန်တွင်အဘယ်ကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရသည့်အကြောင်းရင်း ၄ ခု
ဆွဲဆောင်မှုရှိသောငှားရမ်းခအထွက်နှုန်း - မြန်မာနိုင်ငံ၏စီးပွါးရေးအရှိန်အဟုန်မြင့်မားမှုကြောင့်ရန်ကုန်မြို့ရှိတိုက်ခန်းများအတွက်ငှားရမ်းခမှာ ၈% မှ ၁၂% အထိရှိသည်။ ၎င်းသည်အိမ်ခြံမြေငှားရမ်းလိုသောမည်သူမဆိုအတွက်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။
တိုက်ခန်းငှားရန် ၀ ယ်လိုအားတိုးလာခြင်း - ရန်ကုန်မြို့၏လူ ဦး ရေတိုးပွားလာပြီးမြို့တော်သို့ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်သူများနှင့်အတူတိုက်ခန်းများဝယ်လိုအားမှာလည်းတိုးလာနေသည်။
လျင်မြန်စွာကြီးထွားနေသောစီးပွားရေး - ရန်ကုန်စီးပွားရေးသည်အာရှတွင်အလျင်မြန်ဆုံးတိုးတက်နှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းနိုင်ငံ၏ပျမ်းမျှဂျီဒီပီတိုးတက်မှုနှုန်းမှာ ၇% ခန့်ရှိသည်။
မဟာဗျူဟာမြောက်တည်နေရာ - မြန်မာနိုင်ငံသည်အာရှ၏အင်အားကြီးနိုင်ငံနှစ်ခုဖြစ်သောတရုတ်နှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့နှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေပြီးကုန်သွယ်ရေး၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်စီးပွားရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုတို့ကြောင့်အလွန်အကျိုးရှိသည်။
အနောက်ပိုင်းခရိုင် (မြို့လယ်) 176 တိုက်ခန်းများ ရရှိနိုင်သော
အရှေ့ပိုင်းခရိုင် 160 တိုက်ခန်းများ ရရှိနိုင်သော
တောင်ပိုင်းခရိုင် 15 တိုက်ခန်းများ ရရှိနိုင်သော
မြောက်ပိုင်းခရိုင်3တိုက်ခန်းများ ရရှိနိုင်သော